ထူးခြားသောအရသာ - ပန်းသီးနှင့်အတူချဉ်သခွားသီး,! | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဤသည်အစိမ်းရောင်ပန်းသီးပေးသောအပေါငျးတို့သညျအခွားနူးညံ့ကြင်နာမှုနှင့်အချဉ်ဓာတ်, ကနေကွဲပြားခြားနားသောသခွားသီး appetizer, ချဉ်။ ပေါင်းစပ်မြို့သား Pickled နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအလွန်အရသာနဲ့အရသာရှိတဲ့ Workpiece အနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုအသွင်အပြင်ပေးပါသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်နံ့သာမျိုးကိုအရသာများနှင့်အလင်းပြတ်သားပေးပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရွက်အညီ marinated assorted Zagotovte မူရင်း, သင်နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဒါဟာ3ဌပေါ်တွင်အခြေခံလိုအပ်နေပါသည်:
1,5-2 အရွယ်အစားပေါ် မူတည်. , သခွားသီးကီလိုဂရမ်;
2 သွား။ ကြက်သွန်ဖြူ;
ဆင်တူတဲ့ Currant နှင့်ချယ်ရီသီး (3 သို့မဟုတ်4PCs မှာကြိုးနဲ့တုတ်) အရွက်;
2-3 လတ်ဆတ် tarragon sprigs;
မွှေး။ ငရုတ်ကောင်း - 6-7 ပဲစေ့တွေဟာ;
2 lavrushki စာရွက်။
5 နာရီ။ L. သကြား,
4 Tsp ကြမ်းဆား;
2 မပြည့်စုံ Tsp ရှလကာရည် (Xnumx ရာခိုင်နှုန်း);
ချဉ်သခွားသီး - ချက်ပြုတ်ချဉ်သခွားသီး
1 ။ ဂရင်းနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပါးလွှာချပ်ထဲသို့ကြက်သွန်ဖြူဖြတ်ဆေး။
2 ။ မီးဖိုဘဏ်များ၌ဖုတ်, စင်ကြယ်သူတို့ကိုညီတူညီမျှနံ့သာများနှင့်ပန်းသီးဖြန်းဆွတ်ခြင်း, ဆေးကြောသခွားသီးကိုတင်သောနေကြသည်။ ကြှနျတေျာ့, အစေ့ကနေသန့်ရှင်းတဲ့, ဒါပေမယ့်အရေပြားမထိကြဘူး, ရပ်ကွက်သို့ဖြတ်: ပန်းသီးဒီပြင်ဆင်ပါ။
3 ။ ကြွက်ကြွက်ဆူမှမီးခိုးရောင်ရေ။ သခွားသီးနဲ့ပန်းသီးနှင့်အတူအိုးထဲသို့လောင်း။ အဖုံးတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါ။ ပြုတ်ရည် 20 ပြီးနောက်မိနစ်ကြီးမားတဲ့ဒယ်အိုးထဲမှာရေဗူးပေါင်းစည်း။
4 ။ နောက်တဖန်ဆူပွက်သည်အထိအပူ, ဆား, သကြားလိုအပ်သောဝေမျှလောင်းနှင့်ယိုဖိတ်မှုဘဏ်များများအတွက်ဖြေရှင်းနည်းမွှေပေးပါ။ တဖန်အဖုံးကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်ပြီးသား 10 မိနစ်ဇှ။
5 ။ ထို့အပြင်ချဉ်သောသခွားသီးများအတွက်စာရွက်အရကျွန်ုပ်တို့သည်ဆားရည်အိုင်ကိုတူညီသောဒယ်အိုးထဲသို့ပြန်ပို့လိုက်ပြီး၎င်းသည်ဆူပွက်သည်အထိထပ်စောင့်သည်။ ထို့နောက်စားပွဲပေါ်မှာထည့်ပါ ရှလကာရည် - ပန်းသီးနှင့်အတူတတိယသခွားသီးလောင်း။
6 ။ အဖုံးချုပ်ရိုးစက်ခုံဖိနပ်, ဘဏ်တွေကြမ်းပြင် postelennuyu အပေါ်တစ်ဦးဖျာပေါ်ဇောက်ထိုးထားတော်မူ၏။ ကျနော်တို့နွေးတစ်ခုခုနှင့်အတူအလွတ်အားဖြင့်အားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ် တင်. ဒီတော့သူတို့ကိုအေးမြပေးခြင်း။
7 ။ အေးမြသောနေရာတွင်သို့မဟုတ်အခန်းအပူချိန်မှာပန်းသီးနှင့်အတူချဉ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသခွားသီးတွေကိုသိမ်းဆည်း, ဒါပေမယ့်နေရောင်ခြည်ကနေအကွာအဝေးမှာ။
သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူချဉ်သခွားသီး၏စာရွက်ဝေမျှဖို့သေချာပါစေ, သင်ခဲယဉ်း, သူတို့ကကောင်းတဲ့နှင့်အထောက်အကူဖြစ်ကြောင်းဘူး!
One Response to“ သခွားသီးကိုပန်းသီးတွေနဲ့ Marinated - ထူးခြားတဲ့အရသာပါ။ ”
06.12.2019 မှ 23: 51
65 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,272 စက္ကန့်ကျော် Generate ။